Kungekudala, inkokeli yeqela elithi "Leningrad" sele lifuna umdla ngobomi. Ichaphazela, ngokusobala, impembelelo yomfazi wakhe othakazelisayo, intombazana edumile yaseSt. Petersburg nentombi intombi uKsenia Sobchak Matilda Shnurova. I-Cinderella yanamhlanje evela kumaphondo, aguqulwa ibe yindlovukazi yehlabathi, ngokwakhe ufumana amandla omlingo we-PR, ngoko ke uqondisa amandla omyeni wakhe ongenakuphikiswa kulo mzila ocebileyo.
USergei Shnurov onomdla wokuthakazelisa uBuzovoy
Intambo yaba ngu-Instagrammaker osebenzayo, wafumana abanikizi bezigidi ezimbini neyesigidi kwaye akazange abambelele ingqalelo kwiingxaki zokudakwa, njengokuba ngaphambili, kodwa ngeengxelo malunga nabantu abadumileyo. Ukuba u-Irina Allegrova uya kukhubeka ngenxa yeso sizathu, ngoko u-Posner uya kubiza empini yolwazi, apho ngokuqinisekileyo uya kulahleka.
Enye yale mihla, uShnur wagqiba ekubeni acacise ngomxholo womsebenzi ka-Olga Buzovoy. Kuye kwenzeka ukuba wasayinwa kwiphepha leenkwenkwezi "yeNdlu-2" kwi-Instagram kwaye ilandele ngokukhawuleza iimpapasho zakhe. Kodwa akukhange kakhulu umgangatho wengoma yakhe yomculo, njengoko amandla angenakuphikisana aphindaphindiweyo ngokuthi "ingqiqo kunye nengcamango engapheliyo". Umculi waqhathanisa into eyenziwa yiBuvvvaya eneenkcukacha ezifanayo kwi-business show show business-ballerina u-Anastasia Volochkova, onobukhwele obufanayo usebenzise zonke iindlela zokufezekisa injongo yakhe.
UShruurov wabuye waqaphela ukuba abaculi bafana nabantu abanjalo bonke abantu, kwaye zenziwa ngabakhonzi abanqabileyo, abanikela ngezithixo zabo ezingekho. Kwaye ukuba inkokeli ye-"telestructure" iqokelela "i-Olimpiki", ngoko kubalulekile ukuba abantu bayisebenzise.
"Kuhle kakhulu ukuba iBuvv ingoma, ipholile. Kodwa ixesha labantu abanama-guitars kunye neengqungqo ziphelile. Ingoma ngokwayo sele ifunwa ngumntu. Kwaye iqela elithi "Amakhompi" liyakhuza ngalo. Ndiyibhale nje le ngoma enobulumko, yenza uhlobo lokuziyeka, njengelahleko kunye nokuba yivesi, kwaye lipholile. "
Iqhawe likaOlimpiki uBruce Jenner uye waba yiCaitlin ethandekayo
UDmitry Shepelev akazange abe khona kwi-first hearing kwibhunga lokulondoloza
UJeanne Epple uzisola ulutsha oludlulileyo
Imbalelwano esondeleyo phakathi kweBuvvaya noDmitri Nagiyev beza kwi-Intanethi
I-egg-honey diet for 3 days
Ukunyangwa kotywala kunye nezilwanyana zomntu
Ikhekhe le-Apricot nge-cottage cheese
Iidraphe zokulungiselela i-cocktail ngoMatshi 8
Isobho seMushroom kunye nama-mushroom
Amanyathelo okuqala ekuphuhlisweni kokuqala komntwana
Iifatata ezifihliweyo kunye ne-basil
Indlela yokuphilisa kubanda komntwana kunye nezilwanyana zomntu
U-Alla Pugacheva uthumele kwi-Instagram yokuqala yevidiyo kaLisa Galkina